विप्लव, माइला लामा र निर्मलाः जसको हिजोको सम्बन्ध यस्तो थियो ! – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२६ असार २०७७, शुक्रबार १९:४७ English
विप्लव, माइला लामा र निर्मलाः जसको हिजोको सम्बन्ध यस्तो थियो !
काठमाडौँ, ६ कार्तिक ।
हाम्रो देशै उडायो, हाम्रो साखै उडायो
हरर उडेर नजाऊ न है
नबनाई कहाँ हुन्छ आफ्नै देशलाई
लाला र बाला, जहान बच्चा, चटक्कै छाडेर
के लानु छ र हेपाइको मोराइ धन, पैसा जोडेर
यही छ पानी, यही छ खानी चाहिन्छ जागिर
यही छ धन, यही छ मन मायाको सागर
कोही छन् दिल्ली, कोही छन् अरब दिन–रात खटेर
काँ बन्छ देश पसिना, पौरख विदेशमा पोखेर
जालीको जाल, दुष्टको राज जगबाटै नासेर
दुःख र सुख बाँडेर सँगै बसौंला हाँसेर
सन् २०१६ अप्रिल ४ मा युट्युबमा राखिएको यो गीतका लेखक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ हुन् । माइला लामाले संगीत गरेको उत्तः गीत निर्मला घिसिङले गाएकी थिइन् । विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सोही समूहमा रहेका माइला पनि थुनामा छन् । तर यही बीचमा निर्मला भने आफ्नो सांगीतिक भविष्य खोजिरहेकी छिन् ।
विप्लव, माइला र निर्मला तीनै जना द्वन्द्व तत्कालिन बिद्रोही माओवादीमा थिए । तर अहिले उनीहरु तीन तिर छन् । विप्लव र माइला एउटै समूहमा भएपनि माइला अहिले थुनामा छन् । उनलाई कसरी राखिएको भन्ने खुलाईएको छैन ।
निर्मला अहिले सांगीतिक कार्यक्रम ‘दी भ्वाइस अफ नेपाल’मा प्रतिस्पर्धीका रुपमा भाग लिएकी छिन् । ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन’ दावेदारी प्रस्तुति दिएकी उनले यो गीत गाएपछि कोच दीप श्रेष्ठले सोधे– ‘किन यति धेरै वेदनाको गीत तपाईंमा आयो ?’
यो प्रश्न आएपछि भावकु हुँदै निर्मलाले भनिन्, ‘म जन्मेको दुई वर्षमा मेरो आमाले मलाई छाडेर जानुभयो । १०–१२ वर्षपछि भने म एउटा मुभमेन्टमा गएँ, किनभने परिवारमा राम्रो वातावरण थिएन । त्यति खेर माओवादी आन्दोलन थियो । गीत गाउनकै लागि त्यो आन्दोलनमा गएँ । मेरो जर्नी यस्तै छ, ह्याप्पिनेस चाहिँ छैन ।’
दीपले सोधिहाले, ‘माओवादीमा तपाईं संगीत सिक्न जानुभएको हो या गाउन जानुभएको हो ? निर्मलाले जवाफ दिइन् ‘सामाजिक चेतनामूलक गीत हुन्थे । युद्धमा लागेकाहरूलाई उत्साह भर्ने गीतहरू हुन्थ्यो ।’ उनी कोच दीपकै टिममा छिन् । अहिले नक आउट चरणमा प्रवेश गरेकी निर्मलाले भ्वाइस अफ नेपालमा ‘लडाकु गायिका’को उपनाम पाएकी छन् ।
यसरी हिजो बिद्रोहमा लागेकाहरु कोही प्रहरीको हिरासतमा छन्, कोही भूमिगत भएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दैछन् । कोही भने सांगीतिक भविष्यको दौडमा छन् । हिजो एउटै मोर्चामा रहेर मूलुकका लागि लड्नेहरुको यो तितरवितर साँच्चै वियोगान्त छ ।
६ कार्तिक २०७६, बुधबार १७:२३ मा प्रकाशित
५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम	२६ असार २०७७, शुक्रबार १४:४०
नेपालको नयाँ नक्साको विरोधमा भारतले पठायो कूटनीतिक नोट	२५ असार २०७७, बिहीबार १४:४६
भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?	२५ असार २०७७, बिहीबार १३:०८
जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता	२५ असार २०७७, बिहीबार १२:३७